RASMI: Goolhaye Willy Caballero oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Chelsea – Gool FM
RASMI: Goolhaye Willy Caballero oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Chelsea
(London) 22 Maajo 2019. Willy Caballero ayaa ogolaaday inuu sii joogo Chelsea xilli ciyaareedka soo socda ee 2019/20, kaddib markii uu kooxda Blues qalinka ugu duugay maanta heshiis hal sano ah.
Goolhayahan ayaa Chelsea kaga soo biiray kooxda Manchester City, iyagoo beeca xorta ah ku soo qaatay bishii July ee sanadii 2017-kii, tan iyo markaas waxa uu kooxda u saftay 22 kulan, 10 ka mid ah kulamadaas ayuuna shabaqiisa gool ka ilaashaday.
Bayaan ay soo saartay Blues oo lagu qoray website-ka rasmiga ah ee kooxda ayaa u dhignaa: “Willy Caballero waxa uu saxiixay heshiis kordhin uu Chelsea kula sii joogayo xilli ciyaareedka soo socda ee 2019/20.”
“Xilli ciyaareedkan xiddiga reer Argentine waxa uu ciyaaray sagaal kulan, waxaana loo diiwaan geliyey inuu shan kulan shabaqiisa gool ka ilaashaday, kulamadaas oo ay ku jiraan kii Premier League ee aan guusha Tottenham kaga gaarnay Bridge iyo barbarihii dhowaan aan la galnay Leicester.”
Xiddig ka tirsan kooxda Arsenal oo Chelsea ka caawiyey saxiixa Christian Pulisic!!
RASMI: Laacibkii ay wada doonayeen kooxaha waa weyn ee Premier League, Julian Brandt oo ku biiray Borussia Dortmund